5 Ngwaọrụ ndị na-akwado ọkwa ọ bụla na-amalite Blogger
Ya mere ị maliterela blog gị. Ekele! Eleghi anya ịchọrọ ibi ndụ na ya,ma ọ bụ ma eleghị anya, ịchọrọ ịkọrọ ndị enyi gị mmetụta sitere na ezumike gị ọhụrụezinụlọ. Nke ọ bụla, e nwere ọtụtụ ụzọ ị nwere ike isi mee ka blog gị dị egwu na ọkachamara.Julia Vashneva, Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, na-akwado ngwaọrụnke dị mkpa maka onye ọ bụla chọrọ ịmepụta blog.
1. Na-atụgharị uche
Spellcheck dị mma, ma ọ bụghị mgbe niile ka ọ dị mma. Dabere na ikpo okwu blog gị(Blogger, WordPress, wdg), ị nwere ike ọ gaghị enwe ọrụ nyocha. Na ọbụnaọ bụrụ na ị na-eche na ederede na ụda asụsụ gị na ụwa gụrụ akwụkwọ, ndị na-agụ ga-chọpụta ihe niile zuru oke. N'okwu a, ana m akwado Grammarly. Grammarlybụ ngwa mgbakwunye n'efu, nke e mere maka ederede bara uru. Ọ na-akpaghasị ihe niilenke edere gị maka ma ọ bụrụ na ị na-ede ihe ma na-emezighị emezi ma nyezie aro na otu esi edozi ha.
2. Nkọwa okwu
Ikwesiri inwe isi iyi ebe i nwere ike ichoputa ihe ndi mara mma n'efu. Anyị bina ọha mmadụ anya, na mgbe ndị mmadụ na-agụ online, ha na-atụ anya ịhụ agba naeserese..Ọ bụrụ na ị gaa maka ihe mbụ ịchọtara na Google, ị ga-agba ọsọ ahụna-ebugote ha na iwu akwadoghị. Ozi ọma ahụ bụ na e nwere saịtị dị iche iche nwere ikeEnyemaka! Morgue File na Wikimedia Commons bụ ebe abụọ ị nwere ike ibudatafoto foto n'efu n'enweghị ikike nchekwa nke onye na-ese foto.
3. Kalinda ma ọ bụ Onye Nhazi
Ndị mmadụ na-amasị blọọgụ na-emelite kwa ụbọchị. Nwelite mmelite na-egosi ibu na kariaha na-agụ akwụkwọ, nke pụtara mgbasa ozi na ihe ịga nke ọma maka blog gị. Ọtụtụndị ọkachamara na-ekwenye na-emelite blog gị ọbụlagodi atọ ma ọ bụ ugboro anọ n'izu - manaọ bụrụ na ị naghị eme atụmatụ gị posts tupu oge eruo, ị ga-esi na echiche! Ụfọdụndị na-ede blọgụ na-ahọrọ kalenda akwụkwọ akụkọ pen na-akwụkwọ mgbe ndị ọzọ na-eme nke ọmaederede na kọmputa. Kedu ụzọ ọ bụla, jide n'aka na ị nwere ike ịnweta ihe niileede akwụkwọ gị maka izu ole na ole sochirinụ ka i wee ghara ịdaba na afọ ojuju!
4. Nnyocha nchọpụta
Keywords, SEO, na mkpado nwere ike ịdọrọ ka mumbo-jumbo ka ndị na-ede blọgụ ọhụrụ, maỊmụta ha nwere ike ịmepụta blog gị na nchọta nke nsonaazụ ọchụchọ.Ebumnuche bụ isi n'azụ SEO (nyocha njirịrị njikwa search) bu nkeokwu ndị mmadụ ga-achọ ma ọ bụrụ na ha na-achọ blog gị. Ọmụmaatụ,isiokwu a ga-enwe ntinye okwu dịka "nchịkọta blog," "nyochacha blog", wdg.Ọ bụ ezi echiche ịghaghachi okwu ndị a na isiokwu gị ka ị chọọengines nwere ike ịchọta ha ngwa ngwa. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ntanetị blog na-agụnye ụzọitinye mkpụrụokwu nke gị, ihe ndị dị ka Google Planner nwere ike igosi ọtụtụndị mmadụ na-achọ isiokwu gị kwa ụbọchị, n'ihi ya ị nwere ike ịchọta ndị kasị ewu ewu.
Ọzọkwa na teknụzụ nke ihe, ngwá ọrụ nyocha dịka Analytics Google ga-agwaị mmadụ ole gara leta gị taa, ma ọ bụ izu ikpeazụ, ma ọ bụ ihe ọ bụla. Ọ bụkwaegosi otú ndị na-agụ hụrụ saịtị gị na ihe ọchụchọ ndị kachasị ewu ewu, gịnwekwara ike ịmụta ihe ndị posts na-elebara anya. Mgbe nchịkọta dịmara mma na nhazi ntanetị taa, jide n'aka na ị ghọtara ọrụ niilenke ngwá ọrụ a ka i wee nwee ike soro onye na-agụ akwụkwọ gị ma mụta ihe na-eme ka blog gị pụta.
Ịde blọgụ nwere ike ịbụ ezigbo ntụrụndụ gị na ọrụ ịba uru,n'eziokwu, choro otutu mgbalị. Site na ahụmahụ nke Semalt , ngwaọrụ kwesịrị ekwesịga-esi ebelata oge mmụta gị na ikpe-ezighi ezi ka ị ga-adị mfe karị na-aga n'elu Source .